Dubai Company - အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း
ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်သင်ကြားရေးဂျော့ဘ်များအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု
ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီ - ကျနော်တို့လက်ရှိအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအခြားကုမ္ပဏီများအဖြစ်အလားတူနေရာလွတ်ဘို့စုဆောင်းနေကြသည်။ အမှန်တကယ်, ကျွန်တော်အလွန်ပျော်ရွှင်နေကြသည် သငျသညျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီ join ချင်ပါတယ်လျှင်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်သည်ဒူဘိုင်းမှာအလုပ်မလုပ်လိုလျှင်။ ကျနော်တို့မှပျော်ရွှင်ထက်ပို ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေသင့်ရဲ့အလုပ်အကြောင်းကိုသင်နှင့်အတူစကားပြော.
ဒါကြောင့်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကျနော်တို့နိုင်ကြသည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာရှာဖွေသင့်ရဲ့အလုပ်အတူသင်ကူညီ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုတစ်ကြိမ်အလုပ်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်အတော်လေးကိုယုံကြည်ဖြစ်ကြောင်းအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ အလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်သငျသညျ သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီတစ်ခု updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်တဦးတည်း၏ CV ကိုကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့၏အချို့ ဒူဘိုင်းစုဆောင်းမှုအေးဂျင့် ပွဲချင်းပြီးပေါ်တွင်သင်၏ CV ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အကြှနျုပျတို့သညျအလုပျတပေးနိုငျခဲ့ပါသညျ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကုမ္ပဏီအပြင်, ကျနော်တို့ကအိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေကြပါသည် နှင့် ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်အလို့ငှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအသီးအသီးအဘို့အလုပ်လျှောက်လွှာကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင် အာရှကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်း နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း Market က။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာထိပ်ဆုံး rated ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့အလုပ်ရှာဖွေနေန်ဆောင်မှုများပေးစှမျးနိုငျပါ၏ အလုပ်ရှာနေသူတိုင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီသုံးပြီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပေးယောဘကိုနေရာလွတ်သည့်အခါဖြစ်ပါသည် အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူလျှောက်လွှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HR မန်နေဂျာများထံသို့စေလွှတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီရရှိနိုင်ပါသည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးချင်းစီသုံးသပ်ပြီး။ ဒါကြောင့် အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်စျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီရှိပါသလဲ။ ငါတို့သည်လည်းဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ကာတာအတွက်ကူညီခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
တိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။ ကျနော်တို့တတ်နိုင်ကြသည် သငျသညျယူအေအီးအတွက်အံ့သြဖွယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူပေး။ သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ၏ CV ကို upload တင်တဲ့အခါ။ ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အလုပ်ရှာဖွေသူနှင့်သင်ဒူဘိုင်း၌နေရာချရမည်ချင်ပါတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျလိုအပျကွောငျးဆိုအကူအညီဖြင့်သင့်ကိုကူညီနိုင်ကြသည်။ ကျနော်တို့ယူနိုက်တက်အာရပ်စော်ဘွားအလုပ်ဈေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, သင်စိတ်ကူးနိုငျသောအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုတဦးတည်းကိုဝယ်ကြလော့။ သင့်ရဲ့အဘို့ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေရေး။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေအလုပ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ကြသည်။ ဘယ်မှာသင်သည်တတ်နိုင်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီတစ်ခုအံ့သြဖွယ်က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အအကူအညီရ.
အလုပ်အကိုင်အဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူရှာဖွေအတူ Legit အကူအညီနဲ့
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, အသီးအသီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်သုတေသနပြုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် 100% ကူညီပေးနေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီရဲ့ အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့မှထိပ်တန်းအမှုဆောင်အရာရှိကူညီပေးနေ, ကာတာ, ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်တောင်အာဖရိက။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးချင်းစီအလုပ်တစ်ခုတွေ့သောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ website တွင်လျှောက်ထားမည်သူတိုင်းလူတစ်ဦးပါ။ အာရုံနှင့်အတူ အကောင်းဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းန်ဆောင်မှုဒူဘိုင်းအတွက် HR မန်နေဂျာများနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုအ LinkedIn တို့အပေါ်လူ့အရင်းအမြစ်များဒါရိုက်တာများ။
ကျနော်တို့လက်ရှိယူအေအီးကနေလတ်ဆတ်တဲ့အလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေနေကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်မသွားကြသည်မဟုတ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအိန္ဒိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့က Facebook ကနေ 270,000 အလုပ်ရှာဖွေသူများကျော်ရှိခြင်းနေကြသည်။ ထိုအ 500000 ကျော်သေချာဖြစ် LinkedIn တို့ထံမှအလုပ်မုဆိုးအမြဲတမ်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်သုတေသနပြု.
သငျသညျဒူဘိုင်းရှိသူတို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူတဦးဖွစျနိုငျပါတယျနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်။ ကျနော်တို့အင်ဂျင်နီယာအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေကူညီနေကြတယ်, ရောင်းအားအလုပ်နှင့်ပင်ကျွန်တော် CEO ဖြစ်သူအလုပ်အကိုင်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်, ငါတို့သည်လည်းရှိပါတယ် WhatsApp ကိုအပေါ်လောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူကူညီပေးနေ.
တင်ခြင်းကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့်အလုပ်အကိုင် applications များ
အပ်လုဒ်လုပ်နေသည် CV ကိုသင်သာ $5ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်စျေးနှုန်းမှာအလုပ်ရှာဖွေန်ဆောင်မှုများပေးကြသည်အဆုံးမှာထောက်ပြရန်။ ဒါကြောင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုစတင်သုံးစွဲဖို့သင်ပွဲချင်းပြီးကြောင်းပြုနိုင်သည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကိုလည်း $ 9,99 များအတွက်န်ဆောင်မှုရှိခြင်း။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, သင်ကအလုပ်လျှောက်လွှာကိုထွက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ တဖန်သင်တို့တစ် 60 ရက်ပေါင်းရပါလိမ့်မယ် သင့်ရဲ့အလုပ်အတွက်အာမခံချက်သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီအသုံးပြုတဲ့အခါရှာဖွေနေ.
ဒီတော့အလုပ်အကိုင်အဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူန်ဆောင်မှုများရှာဖွေကိရိယာအားလုံးပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီစျေးအသက်သာဆုံးန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေရေးများအတွက်။ မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့သက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။ ရှင်းမှ, သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အကြံပေးချက်များရှာနေမယ်ဆိုရင်။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်တဦးတည်းရကြလိမ့်မည်, သင်မှန်ကန်သော site ပေါ်တွင်ဖြစ်ကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သော Bayt နှင့် GulfTalent စုဆောင်းမှုတွင်ကျယ်စွာအဖြစ်ဤမျှလောက်အလုပ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်။ နှင့်အခြားလက်အလုပ်အကိုင်များအပေါ် ဒူဘိုင်းပရဒိသုတစ်ခုကျွန်းရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအတောအတွင်းစစ်ဆေးမှုများလည်း Jobs.com အမှန်ပင် Nauruki အတွက် ကိုလန်ဘိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်။ ယခုအချိန်အထိဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ Google ထံမှတွင်ကျယ်စွာနှင့်အကောင်းဆုံးသူတွေကိုစစ်ဆေးပါ။ ဒါကြောင့်အဲဒီမှာမဟုတျပါ ဒူဘိုင်းအတွက်ပွင့်လင်းပိုပြီးဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များ အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးဧရိယာထဲမှာ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အတိတ်ကာလအနှစ်ကျော်အစာရှောင်စိုက်ပျိုးကြသည်။ ထို့အပြင်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများသွားရောက်လည်ပတ်နှင့် HR မန်နေဂျာနှင့်တကွသင် connect ဒူဘိုင်းမြို့.
ယူအေအီး 2019 နှင့်ပို့ခြင်း CV ကိုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ Find
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျ 2019 အတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မယ့်လမ်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ နောက်ခံတှငျကြှနျုပျတို့အမျိုးမျိုးသောအားထုတ်မှုများနှင့်အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းများစီမံခန့်ခွဲ။ ဆန္ဒရှိ အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများရှာဖွေနေများအတွက်အကူအညီ။ ကျနော်တို့ဤမျှလောက်များစွာသောနှင့်အတူပူးပေါင်းနေကြသည် ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာစုစုပေါင်းရှိတယ်။ သင်၏အလုပ်ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်သင်၏အလုပ်ကိုပုံဖော်နိုင်သည် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူလတ်ဆတ်တဲ့။ တကယ်တော့အဲဒီလိုအိန္ဒိယနှင့်တောင်အာဖရိကအဖြစ်နိုင်ငံအများကနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးချစ်ခြင်းမေတ္တာယူအေအီး၌ထားခံရဖို့ရှိပါတယ်။
အလုပ်ရှာဖွေရေးက 2019 အတွက်တန်ဖိုးရှိပါလိမ့်မည်ရှာဖွေနေ။ တဖန်သင်တို့ယူအေအီးအသစ်အလုပ်ရှင်များအဘို့အကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအစုစုကိုဖန်တီးသင့်ပါတယ်။ ထိုအစာရှောင်နေပါစေဂုဏ်နဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုကြောင့်အလုပ်မရ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်လမ်းအတွက်။ အကွာအဝေးမှာတော့ဒူဘိုင်းနှင့်သူတို့အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခွက်ပါပဲ အားလုံးစော်ဘွားတစ်ဦးအလုပ်ရှာနေ။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းသူတို့ CV ကိုထွက်မပို့နေတဲ့အခါမှာအချိန်အများကြီးရှိပါတယ်။ ထိုသူတို့ကနေ အသစ်တစ်ခုကိုအလုပ်အကိုင်ရရှိ။ ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့ CV ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးနောက်နှင့်မျှမအလုပ်အကိုင်များပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။
အလုပ်ရှာဖွေသူများအများစုဟာမသိရပါဘူး ဘယ်မှာ CV ကိုအတူ hit ရန်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူကုမ္ပဏီများမှငှားရမ်းရန်မှာကြည့်ပါ။ တစ်ဦးက Careerjet အလုပ် site ကို နှင့် ပင်လယ်ကွေ့စုဆောင်းမှုက်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်မြင်ကြပြီ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူအလုံအလောက်အတွေ့အကြုံကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ သငျသညျသဘောပေါက်စတင်ခင်မှာသင်အရည်အချင်းများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ သင့်ရဲ့အဘို့ ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နှင့်အဖုံးအက္ခရာအားလုံးအတွေ့အကြုံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ထိုကျောင်းများနှင့်သင်သည်သင်၏ CV ကိုအတွက်ခဲ့သောနောက်ထပ်အမှုအရာတို့ပါဝင်သည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ် 2018 အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ ပင်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွင်း၌အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်မရှိကြပါဘူး။ သင်သည်သင်၏အနာဂတ်အလုပ်ရှင်ရန်သင့် CV ကိုထွက်ပေးပို့ခင်မှာသင်ရှိသည်သောတိုင်းအသေးစိတ်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ နှင့်သင်တန်း၏, ထိုအပေါငျးတို့သ fixed ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အိုကေ, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအပေါ်ရှာဖွေနေဖြစ်ကြောင်းအခါတိုင်း။ သငျသညျအခြိနျနှငျ့အားထုတ်မှုတစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောပမာဏကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ် သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းစေရန် အကောင်းဆုံးဗားရှင်းသင်သည်တတ်နိုင်သကဲ့သို့။ မန်နေဂျာများနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတူညီတဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရှိသည်နှင့် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအဘို့အလုပ်ရှာဖွေသူများအားမရ။ ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအနေအထားများအတွက်သက်ဆိုင်သောတစ်ခုတည်းသောလူတစ်ဦးရိုးရှင်းစွာသူတစ်ဦးအလုပ်အကိုင်အစာကိုရရနျမတတျနိုငျရဲ့အပေါ်အခြေခံပါတယ်။
တစ်ဦးအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအဘို့, သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload တင်လို့ရပါတယ်။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ CV ကို Add နှင့်သင့်ဖြစ်ပွားမှုဥပမာတစ်ခုစမ်းပါ။ အကျိုးကိုခံရ အသစ်တစ်ခုကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့။ ငှားရမ်းမန်နေဂျာ၏ CV ကိုအပေါ်တစ်ဦးအလေ့အကျင့်မှာကြည့်မယ်လို့ပဲ။ သင်တစ်ဦးအတော်လေးကောင်းတဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အစုစုကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်၌သင်တို့၏အလုပ်၏အကွာအဝေးပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းနေရာလွတ်ပြည်တော်ပြန်များအတွက်မရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနေကျွမ်းကျင်သူများ ပိုမိုမြင့်မားသောလစာအကြေးနှင့်အတူ။ ဦးတည်ရာနှင့်အများဆုံးဖွံ့ဖြိုးပြီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူခရီးစဉ်သွားဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များကျွမ်းကျင်သူများသည်။ သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာလိုလျှင် ဒူဘိုင်းသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှစတင်။ ဒါကြောင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေနေကြသည်အချိန်ကိုခံစားသင့်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စကသငျသညျဖွစျသှားလိမျ့မညျဘယျသို့အစဉ်အမြဲဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီအတွက်အိပ်မက်အလုပ်ရှာတွေ့မယ့်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်။ သောဂြိုဟ်တဝိုက်ဤမျှလောက်များစွာသောအလုပ်ရှာဖွေသူများရှိပါတယ် ထို့အပြင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရချင်ပါတယ်.
အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများ ယူအေအီးအတွက်ရရှိနိုင်အသစ်သောအသက်တာကိုရှာဖွေနေ။ ဒါပေမဲ့အလုပ်အကိုင်အရွေးချယ်ရေးနှင့်လစာအလုပ်၏လိုင်းပေါ်မူတည်သည်။ ထိုအသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကိုဘယ်မှာ သငျသညျရရှိနိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည် အမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်များတွင်။ foreground က admin ရဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ, စာရင်းကိုင်အလုပ်အကိုင်များ, အိုင်တီအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ, အင်ဂျင်နီယာအလုပ်အကိုင်, အစိုးရအလုပ်အကိုင်များ, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အလုပ်အကိုင်များ, ဧညျ့အလုပ်အကိုင်များ, လက်လီအလုပ်အကိုင်များ, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်အတွက်, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များ, ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအရောင်းအလုပ်များ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်များ၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်များ၊ အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာများ။ အလုပ်ရှင်တွေကမင်းဆီကနေကြားချင်ကြတယ် ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေ.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအလုပ်နေရာလွတ်ဘို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူတွေ့မေးမြန်းပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် 95 တရာထောင်ပေါင်းများစွာ၏စကားပြော ကျွန်တော်တို့ရဲ့စော်ဘွားနှင့်အတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ ကုမ္ပဏီနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ် site ကိုလာရောက်လည်ပတ်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, သင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပျလုပျဖို့သင့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ စုဆောင်းမှုအသင်း သင်၏နောက်ခံပန်းတိုင်များနှင့်လူနေမှုပုံစံစသည့်ကိုက်ညီမည့်အလုပ်ကိုအမြဲရှာပါ။ သင်လိုအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းရှာဖွေသူများကို 10 ကျော်နှစ်ပေါင်းများစွာကူညီခဲ့ပြီးနောက် အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှင်များနှင့်အတူထိုင်လျက် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများက။ ထို့အပြင်အိပ်မက်ဘဝ၏လမ်းသစ်ကိုရှာရန်သင့်တော်သောနေရာဖြစ်သည်။
သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေသူအမြဲလုပ်နိုင်အဖြစ် ပင်ကို Google ကုမ္ပဏီနှင့်အတူယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရ။ သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီအပေါ်အခြေခံပြီးအံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းများပေး အာရှအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့.
အကျဉ်းချုပ်တှငျကြှနျုပျတို့ဒူဘိုင်းဈေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပေးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား, သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူထားရှိခံရဖို့ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် သငျသညျမိုဘိုင်းမှာလူကြီးမင်း၏ CV ကို add နိုင်ပါတယ်။ ကြိုးစားရန်ထိုက်တန်ဖြစ်ကြောင်းဤမျှလောက်များစွာသောတကယ်အပြုသဘောဆိုဒ်များရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကြိုးစားနေ ?. ကျနော်တို့လက်ရှိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြောင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်စီမံကိန်းကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ.
ဒူဘိုင်းမြို့ကျိန်းသေကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ အဓိက ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာကိုအလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်ပြည့်ဝ၏။ သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးမှန်ကန်သောလမ်းအတွက်ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သငျသညျ, သူတို့ထဲကတဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အခုအချိန်မှာ ယူအေအီးအတွက်အများအပြားကောင်းသောအရာကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ အံ့သြဤသည်နေ့ရက်သည်ရဲ့အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများနှင့်ဧည့်သည်များ။ ဒူဘိုင်းထဲတွင်နေရာခံရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းကိုအကောင်းဆုံး၌တည်ရှိ၏ ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုယူအေအီးအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေတာ.
ငါတို့သည်လည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်စီးပွားရေးအကြောင်းကိုဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုများတွင်, သငျသညျယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ မန်နေဂျာများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေန်ဆောင်မှုများပေး။ ယခုကြှနျုပျတို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှပြည်တော်ပြန်ကူညီပေးနေနေကြသည်။ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေအတွက်သော့ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စူပါစမတ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကိုရှာဖွေရန်လမ်းလမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးဖြစ်ပါသည်။ သစ်တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်, သင်ကျိန်းသေကြောင်းကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီအဘယ်သူမျှမအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ no.2 အဖြစ် rated ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဒူဘိုင်းအတွက်အရေးတကြီးအလုပ်နေရာလွတ် ကုမ္ပဏီ
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စ, သင်အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်ရှိရာအခြားသောအရပ်အဖြစ်။ ထိုသို့ဝေးယူအေအီးတို့သည်အမှမဟုတ် ဆော်ဒီအာရေဗျကုမ္ပဏီများမှ သူတို့ထဲကအများစုဟာနိုင်ငံတကာငှားရမ်း။ ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အော်တိုအလုပ်အကိုင်များ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအလုပ်နေရာလွတ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါသင်သည်ကာတာနိုင်ငံသို့မဟုတ်ပင်ကူဝိတ်အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပြောင်းရွှေ့ရနိုင် သို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းပိုလန်မှ.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်တို့သိရ အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဒူဘိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ကိစ္စတွင်သင်သည်သင်၏အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်အခြားအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများထက်အများကြီးမြန်အသစ်ကနေရာလွတ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒီစိတျထဲတှငျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီအသေးစိတ်အလုပ် post ကိုရေးသားအတူ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခြေအနေများအကြောင်းကို။ သင်တန်း၏, အလုပ်အကိုင်အခြို့ရှာတွေ့ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဒါပေမဲ့နေရာလွတ်ကဲ့သို့သောအများကြီးရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်သင်ကြားရေးနေရာလွတ်။ သငျသညျနီးပါးပွဲချင်းပြီးအလုပ်ရနိုင်ဘယ်မှာ။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေရန်။ အထူးသဖြင့်အတွင်း ငှားရမ်းဖြစ်ကြောင်းဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများက ဒါကြောင့်အချိန်ကြာပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ရုံယူအေအီးအတွက်သင့်လျော်သောအလုပ်ရှင်များရောက်ရှိဖို့။ သငျသညျအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စ သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါနှင့်မည်သို့ကောင်းစွာသင်ပြုမူဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုအကောင်းဆုံးများထဲမှဖြစ်ရပါမည်။
ဤစကားမှန်အသစ်နေထွက်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အလူမြိုးတစျမြိုးဖိလစျကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာစော်ဘွားသွားရောက်လည်ပတ့်ကချစ်တော်မူ၏။ 2020 ကုန်စည်ပြပွဲသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်စော်ဘွားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဘူဒါဘီ၏အစိုးရမြို့တော်မြင့်တက် ယူအေအီးအတွက်အများကြီးပိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့။ ဒါကြောင့်ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအသစ်အလုပ်အကိုင်များရှာနေစောင့်ရှောက်ဖို့ကျိုးနပ်သည်။ သငျသညျများမှာအထူးသဖြင့်လျှင် MBA ဘွဲ့ရရှိခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေ။ ဒူဘိုင်းအတွက်ကောင်းစွာပညာတတ်အထူးကုအမြဲကြိုဆိုနေကြသည်။
အလုပ်အကိုင်အများအတွက်အသစ်စျေးကွက်လူတိုင်းအတွက်မြင့်တက်နေသည်။ ဥပမာ, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်တော်ပြန်တောင်အာဖရိကများမှာ သူတို့အလုပ်အကိုင်များရရှိနေကြသည်။ အပတ်တိုင်းနေသောဧရာမအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများလည်းမရှိ ဒူဘိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်း။ ဒါကြောင့်သင်ရုံယူအေအီးသွားရောက်လည်ပတ်သို့မဟုတ်သင်အမြဲရှာဖွေသင့်တယ်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေလျှင် အသစ်က opportunitie များအတွက်s ကို။ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီသင်ကူညီပေးနေမျှော်လင့်နေပါတယ်။
တစ်ဦးကိုရှာပါ ဒူဘိုင်းယောဘ? အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအတစ်စတင်ရန် အသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဒူဘိုင်း!
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးပါ! - ဒူဘိုင်းမြို့လောကဓာတ်လုံးကိုအပေါ်တစ်ဦးအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်သင်တို့သည်ငါတို့၏လမ်းညွှန်များကိုသုံးပါဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။